Beesha Caalamka oo ka hadashay doorashooyinka cakiran | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha Caalamka oo ka hadashay doorashooyinka cakiran
Wakiillada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa u muuqda in ay ka fakarayaan kaliya dhaqaalaha doorashada ay hore u ballan qaadeen, waxayna ka gaabsadeen ka hadlida boobka doorashada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wakiillada Beesha Caalamka ee jooga Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray xaaladda cakiran ee doorashooyinka, waxayna ku baaqeen in doorashada Golaha Shacabka ay noqoto mid daah-furan oo loo dhan yahay, laguna kalsoonaan karo oo ay aqbali karaan dhammaan darafyada siyaasadda.
Waxa ay soo jeediyeen in geeddi-socodka doorashada Baarlamaanka 11-aad ee JFS, uu soo gabagaboobo ka hor dhamaadka sanadka 2021, isla-markaana doorashada madaxweynaha lagu hirgaliyo si deg deg ah.
“Waxaan ku baaqaynaa in daah-furnaan buuxda loo sameeyo dhammaan geeddi-socodyada la xiriira, oo ay ku jiraan magacaabista guddiga soo xulista, xulasta ergada, diiwaangelinta musharraxiinta, kuraas u xirirsta haweenka musharraxiinta ah, si loogu hoggaansamo qoondada boqolkiiba 30 ee lagu heshiiyey, iyo maareynta lacagaha musharraxiinta”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay UNSOM.
Waxa ay guddiyada doorashada ugu baaqeen in ay inay fududeeyaan korjoogeynta dhammaan hawlaha goobaha cod bixinta.
“Waxaan ku baaqaynaa in la tix geliyo xaqa ay musharixiinta u leeyihiin in ay isu soo taagaan doorashada iyadoo la marayo jawi ku dhisan tartan dhab ah oo xalaal ah”. Ayay ku sii dareen.
Wakiillada Beesha Caalamka, waxa ay muddo indhaha ka daawanayeen dib u dhaca doorashada, halka ay hadda u muuqdaan in ay iska indha tirayaan boobka kuraasta baarlamaanka oo ay hirgalinayaan Madaxda maamullada iyo kooxda Farmaajo.
Caddeymo; Askarta Soomaaliya oo xasuuq ka geystay gobolka Tigray
Warar 21 January 2022 21:46
Warar 21 January 2022 19:36
CC Warsame oo ka fal-celiyay qoraal uu qoray Fahad Yaasiin
Warar 21 January 2022 18:41